People.ai: Mepee ikike nke ọgụgụ isi maka ahịa gị, ahịa gị na ndị otu ọganiihu ndị ahịa | Martech Zone
People.ai: Mepee ikike nke ọgụgụ isi maka ahịa gị, ahịa gị na ndị otu ọganiihu ndị ahịa
Fraịde, Ọktọba 26, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na ọgụgụ isi na-aga n'ihu na-eme ka ọtụtụ ndị nwee mkpu, m kwenyere n'onwe m na ọ ga-ewepụ ohere dị egwu maka ndị ahịa na ndị ahịa. Taa, oge dị ukwuu nke ndị na-ere ahịa na-etinye n'ọrụ mmezi teknụzụ, na-ebugharị data, na-anwale, ma na-enyocha nsonaazụ nke atụmatụ ahịa ha iji kwadebe maka mkpọsa ọzọ.
Nkwa nke ai bụ na sistemụ nwere ike ịmụ ihe site na omume anyị, yabụ teknụzụ nwere ike ịkwalite onwe ya, enwere ike ịmegharị data nke ọma, enwere ike itinye ule na-akpaghị aka yana nsonaazụ ga-agbanwe teknụzụ ahụ. AI anaghị edochi talent, ọ ga - enyere anyị aka ịmepụta ihe, na - eme ka anyị pụọ na ahịhịa, ma na - enyere anyị aka ị nweta ahịa na ahịa anyị zuru oke karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
The Ndị mmadụ ikpo okwu na-ejide kọntaktị niile, ọrụ, na njikọ aka iji mee ka ị ghọta ihe ga-esi na ahịa, ahịa, na ndị ahịa na-aga nke ọma. Site n’inyocha data akparamagwa mmadụ, sistemụ a nwere ike ị nweta nzaghachi bụ isi maka imeziwanye ire ahịa yana ire ahịa yana ịgụkwa atụmanya gị na ndị ahịa gị nke ọma.
60% nke ndị otu na-atụ anya ịbawanye itinye ego na AI karịa 50% na 2018. Ntugharị
The Ndị mmadụ ikpo okwu nwere 3 dị iche iche nkebi:
Ngwakọ - arụ ọrụ data weghaara na nkwukọrịta email, ịkọkọta ihe, mkparịta ụka ekwentị, na ọgbakọ vidiyo.
Site na njikọ API n'ime igbe API na email, sistemụ kalịnda, ọdịyo, na ọgbakọ mkparịta ụka vidiyo, yana sistemụ ekwentị - People.ai na - enyere ndị ọrụ ụlọ ọrụ aka ijide ikike ma kwadoo nzukọ gị ikike iji weghara njem niile. na nkwukọrịta ndị ahịa otu-ahịa.
analysis - AIdị data nnabata nke AI dabere na data na-enweghị atụ nke nwere ike ịkọwa ọdịnaya, gụọ mmetụta ahụ, dozie njirimara, nghọta ogo ụlọ ọrụ, na GDPR na ikpo okwu nzuzo. Site na akaụntụ ikwesi ntụkwasị obi kachasị elu nke ụlọ ọrụ na ohere kwekọrọ na algọridim, ndị na-eme ihe ntanetị, na ndị isi na-ahazi kọntaktị na-akpaghị aka nwere ike zuru ike na kọntaktị CRM site na ọrụ ahịa na ire ahịa ga-ejedebe na ebe kwesịrị ekwesị na CRM Ozugbo adabara, People.ai na-enye ikike nke AI iji nyochaa mmetụta, chọpụta okwu ndị asọmpi, ma mepee data kọntaktị ma dozie maka ịmekọrịta azụmahịa na mkpebi kọntaktị nke onwe gị ma nyefee data ọhụrụ na nke ochie na CRM gị.
Nyefee ọgụgụ isi - Ọbụghị naanị na nyiwe ndị mmadụ.ai na-arụ, na-enyocha ma na-akwado data ọrụ gị, ọ na-anapụta data ahụ na nghọta banyere ngwaọrụ ị na-eji. Na mgbakwunye na ngwa weebụ dị ike nke People.ai, e mebere People.ai iji nyefee data na nghọta ozugbo na ngwa ọrụ ọgụgụ isi azụmaahịa gị, ngwaọrụ nkwakọba data, Slack, laghachi na CRM gị, ma ọ bụ ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ site na API anyị siri ike. Data agakwaghị akwụsị dị ka etinyere ya, ọ dọtara ya, nyochaa ya ma nyefee ya ma nyeghachi gị ebe ọ dị mkpa.
Nweta Ngosipụta nke Ndị mmadụ.ai
Tags: ainyochaaAPIAmamịghe echicheọgụgụ isi azụmahịaCRMọgụgụ isiahịa ọma aiNyefeeingestire ahiandi mmadu.aiọrịre ainyocha vidiyo
OneSignal: Tinye Ntugharị Ntugharị site na Desktọpụ, Ngwa, ma ọ bụ Email
Ahịa Aghọwo Lynchpin nke Ọganiihu Na-arụ Ọrụ na Corporations